यी स्मार्टफोनहरुमा ह्वाट्सएप नोभेम्बरदेखि बन्द हुँदै, कतै तपाईँको फोन पनि परेन् ? - Thulo khabar
यी स्मार्टफोनहरुमा ह्वाट्सएप नोभेम्बरदेखि बन्द हुँदै, कतै तपाईँको फोन पनि परेन् ?
मेसेजिङ्ग एप ह्वाट्सएपले यसको सन्देश सेवा धेरै प्रयोगकर्ताहरुको लागी बन्द हुने घोषणा गरेको छ। यसका साथै केहि एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरुले अब भविष्यमा यो सेवाको उपयोग गर्न सक्षम हुने छैनन्।
कुन मितिबाट कुन व्यक्तिको लागी यो सेवाले काम गर्न बन्द हुनेछ भन्ने पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ। यो एक लोकप्रिय एप हो, जुन आज लाखौं मानिसहरुद्वारा प्रयोग गरिन्छ।
यो फेसबुक स्वामित्वमा रहेको एप यसको आफ्नै मेसेन्जर सेवा भन्दा पनि धेरै लोकप्रिय छ। यो धेरै देशहरुमा प्रयोग गरिन्छ। यो एन्ड्रोइडको पुरानो संस्करणमा पनि काम गर्दछ। तर, अब यो नोभेम्बरदेखि पुरानो फोनहरुमा सपोर्ट गर्न बन्द हुनेछ।
ह्वाट्सएपले कुन डिभाइसहरुमा समर्थन गर्दछ?
ह्वाट्सएपले कयौं प्रकारका डिभाइसहरु समर्थन गर्दछ। कम्पनीले आफ्नो वेबसाइट अपडेट गरेको छ र नोभेम्बरदेखि नयाँ सुविधाहरु ल्याएसंगै यो एप मात्र एन्ड्रोइड ४.१ र माथिको अपरेटिङ्ग सिस्टममा चल्ने डिभाइसहरुलाई समर्थन गर्ने बताएकाे छ।
यस पछि, व्हाट्सएप प्रयोगकर्ताहरु जसले पुराना उपकरणहरुमा याे मेसेजिङ्ग एप प्रयोग गरीरहेछन् उनीहरुले अपडेट प्राप्त गर्दैनन्।
व्हाट्सएपको आधिकारिक समर्थन पृष्ठका अनुसार, कम्पनीले एप हाल समयमा एन्ड्रोइड ४.१ र नयाँ संस्करणहरुलाई मात्र समर्थन गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि २०१३ पछि आएका स्मार्टफोनले आउँदो समयमा व्हाट्सएपको उपयोग गर्न सक्षम हुनेछन्। तर, जसको फोन यसभन्दा पुरानो छ, उनीहरुले यसको अपडेट प्राप्त गर्दैनन्। यदि तपाइँको फोन पनि पुरानो हो भने तपाइँले नयाँ स्मार्टफोन किन्नुपर्ने हुन्छ वा तपाईँकोमा एन्ड्रोइड ४.१ अपडेट भएको हुनुपर्दछ।
यी फोनहरुमा काम गर्दैन
ह्वाट्सएपले एलजी अप्टिमस एल ३, सामसङ ग्यालेक्सी एस२, ग्यालेक्सी कोर, जेडटीई ग्रान्ड एस फ्लेक्स र ह्वावे एसेन्ड जी ७४० जस्ता पुराना फोनहरुमा काम गर्दैन्।
एन्ड्रोइड भर्सन ४.०.४ र सो भन्दा पुराना फोनमा ह्वाट्सएप एपले नोभेम्बर १, २०२१ बाट काम गर्न बन्द गर्ने बताइएको छ। अब तपाईँ पनि सपोर्ट गर्ने डिभाइसमा स्वीच गर्नुहोस् र च्याट ईतिहासलाई ट्रान्सफर गर्नुहोस्।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७८, मंगलवार